Baaskiil buur koronto oo ganaax | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta Joojinta buuxda ee fiilada korantada mashiinka isboortiga A6AH26-SM
Batariga: Batariga Lithium 36V / 48V 10Ah Qari shaxda
Meegaarka: Aluminium Fudud Miisaanka Daawaha
Biriigu: 160 Nidaamka kala jejebiye farsamaysan
Tire: 26 * 1.95 inch magnesium aluminum wheel
Jooji buuxa ee fiilada korantada ee fiilada korantada
Gawaarida isku dhafan ee 'Magnesium alloy' ayaa loo isticmaalay ganaax buuxa baaskiilka buurta. Ka dhig baaskiilada korantada korantada moodo badan iyo raacitaanka dareen ka duwan taayirrada hadalka ee baaskiil buur koronto. Ku raaxayso safar aan fuulin iyo xawaare dheereeya oo kaa caawinaya safarka ama safarka maalinlaha ah.
250W / 350W / 500W Gawaarida qiiqa gadaal ah, dooro midka ku habboon dhulka aad degan tahay.
36V / 48V 9AH / 10AH qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo ku yaala tuubada hoose ee baaskiilka. Waxay ku taageertaa qalabka la karhi karo oo fudud.
Neefsashada jiidda hore waxay siisaa saameyn badan oo shoog ah waddada diiqada leh.
Xayiraad buuxda oo korantada baaskiilada korontada ah, waxaad arki kartaa shaashadda digitalka ah ee LCD-ka, laba wiqiyadood oo kaban ah iyo qalajiye shilin, gambaleel iyo suunka suulka. Dhammaantood waxay kaa caawin karaan inaad hesho baaskiil fudud.
Nidaamka qalabka farsameedka 160 ayaa lagu soo rogay baaskiilada buurta korontada oo dhan. Waxay taageeri kartaa raacitaanka cimilada, marna ha ka walwalin jardiinooyinka, dhoobada iyo qoyaanka qoyan iyo kulul ama kulul qabow. Had iyo jeer waa inaad joojisaa baaskiilka awooddaada yar.
Nalal hore oo dhalaalaya oo 3W ah oo la saari karo iyo boosteejada USB ee baaskiilka. Mid ayaa hubinaysa aragtidaada fuulista safarka habeenka, mid kale ayaa hoos u dhigaya dhibaatada marka taleefankaagu kaa dhammaanayo korontada.
Isticmaalka baaskiilada korontada ku shaqeeya ee istiraatiijiga ah naftiisa 26 * Duufka 1.97 iyo naqshad magnesium alloy integrated design.
Baaskiil koronto badan: 26 inji baaskiil buurta korontada iibiya kulul, 48v awood sare mountian ebike, hakin buuxa mtb koronto, 26 inch culeyska taayirrada taayirka ee korantada leh, Baaskiil buur koronto oo caadi ah
Tags:baaskiilka buurta buurta korantada ee korantada
Ka hor: 48V500W baaskiilad koronto ah A6AD26
Next: 29 * 2.35 inji oo koronto ku caawisa baaskiilka buuriga loogu talagalay dadka waaweyn A6AH26